Samsung | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Galaxy S8 နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး ဖုန်းကာဗာ ၅ မျိုး
ဖုန်းကောင်း ကိုင်သူ များဟာ ဖုန်းရဲ့ ဒီဇိုင်း အလှအပ မပျက် ရလေအောင် ဖုန်းကာဗာ ကောင်းကောင်း ဝယ်သုံးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကိုင်တဲ့ ဖုန်း အတွက် သီးသန့် ဒီဇိုင်း ထုတ်ထားတဲ့ ဖုန်းကာဗာကို ဝယ်မှသာ ဖုန်းရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းလည်း မထိခိုက် သလို ကိုင်ရတာလည်း စမတ် ကျကျ လိုက်ဖက် နေမှာပါ။
Galaxy S8 စီးရီးများ ဈေးကွက်ထဲ ဝင်ရောက် လာပြီ ဆိုတော့ ဒီဖုန်းနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဖုန်းကာဗာလေးများကို ညွှန်းချင်ပါတယ်။
(၁) Speck presidio Grip
ဖုန်းကာဗာမှာ ဗြောင်မဟုတ်ဘဲ အစင်းကြောင်းလေးတွေနဲ့ အကွက်ဖော်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းကြိုက်သူများအတွက် Speck က ထုတ်တဲ့ Presidio Grip ကာဗာလေး ရှိပါတယ်။ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်နဲ့သားနားတဲ့ ဒီလို ဒီဇိုင်းမျိုးက လူကြိုက်များသလို ဖုန်းရဲ့ အလှအပကိုပါ အားဖြည့်ပေးတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင် ၅ မျိုးနဲ့ ရောင်းချနေတဲ့ ဒီကာဗာလေးကို ဒေါ်လာ ၄၀ ဈေးနှုန်းနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။
(၂) UAG Pathfinder Series
Urban Armor Gear ကနေ ထုတ်တဲ့ ဒီကာဗာလေးကတော့ အကြမ်းခံဖို့ ကို အဓိကထား ထုတ်တာပါ။ သူ့ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ဒီမော်ဒယ်ကာဗာဟာ drop test လုပ်ရာမှာ စစ်တပ်သုံး အကြမ်းခံစံချိန်မီတာ ဖြစ်လို့မတော်တဆ လွတ်ကျလို့ လည်း စိတ်ပူစရာ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဖြူအနက် နီညိုဆိုပြီး ကာလာသုံးမျိုးနဲ့ လာတဲ့ ဒီကာဗာလေးရဲ့ ဈေးကတော့ ၃၅ ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
(၃) OtterBox Defender Series Realtree Case
ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ အလန်းစားကြိုက်သူများအတွက် လူငယ်ဆန်ဆန် အကြမ်းခံတဲ့ ကာဗာလေးပါ။ OtterBox နဲ့ Realtree တို့ ပူးပေါင်းပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ တမူထူးခြားတဲ့ ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။
(၄) Tech 21 Evo Check
Evo Check ရဲ့ ဗားရှင်းကတော့ အလန်းစား ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး Active Edition နဲ့ ထွက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောဘက်မှာ ကိုင်လို့ ပြုလို့ အဆင်ပြေတဲ့ ရာဇမတ် ကွက်နဲ့ ထုတ်ထားပြီး အမြင့် ၃မီတာ (၉ပေကျော်) လောက်ကနေ လွတ်ကျလို့ လည်း ပျက်စီျးွှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကာဗာမှာ အကြည်သား အဖြူဒီဇိုင်းနဲ့ လည်း ထွက်ထားပြီး ဒေါ်လာ ၄၀ ဈေးနဲ့ ရောင်းချထားပါတယ်။
(၅) Spigen Thin Fit
ပါးလွှာ ချပ်ရပ်ပြီး သေသပ်သလောက် ရိုးရှင်းတဲ့ ဖုန်းကာဗာလေးဖြစ်ပါတယ်။ Spigen က ထုတ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ဖုန်းနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ကာလာတွေဖြစ်တဲ့ ရွှေရောင် ၊ အနက်ရောင်နဲ့ အပြာနုရောင်သုံးမျိုးနဲ့ လာပါတယ်။ ဈေးကတော့ ၁၅ ဒေါ်လာ ဖြစ်ပါတယ်။
From : Duwun by Nyein Min Wai
Originally published at - http://www.duwun.com.mm/tech/gadget/galaxy-s8-id6568655.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, April 24, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ Samsung, မိုဘိုင်းဖုန်းလမ်းညွှန်
Samsung Galaxy Devices များအတွက် နောက်ဆုံးထွက် Odin 3.11.1 Tool BY CHAN LAY
Samsung Galaxy Devices များအတွက်
နောက်ဆုံးထွက် Odin 3.11.1 Tool ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Odin ဆိုတာကို အားလုံးလည်းသိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်
အထူးပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ Samsung Devices များ
အတွက်မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Flash Tool ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထွက်လာတဲ့ ဗားရှင်းအသစ်တွေဟာ Galaxy S7,and S7 Edge
ဖုန်းများနဲ့ Galaxy S6 (Edge)(Plus), Note 5, S5, Note4စတဲ့ အမြင့်
ဒီ Odin Tool လေးရဲ့ Features တွေထဲ PA/PDA Option လေးကို
ဥပမာလေးတစ်ခုအနေဖြင့် အနည်းငယ်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်၊ Firmware
ရေးမလား၊ Root လုပ်မလား၊ Custom Recovery များထည့်သွင်းမလား
စတဲ့ Samsung ဖုန်းများအတွက် အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းများကို Stable အကျဆုံး
အနေအထားဖြင့် အားလုံးသောဖုန်းများကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
PDA/PA Option ပိုင်း
1. Only .tar File Firmware များရေးနိုင်တယ်
2. CF Auto Root File ဖြင့် Root လုပ်နိုင်တယ်
3. Kernel ဖိုင့်ဖြင့် Root လုပ်နိုင်တယ်။
4. TWRP & CWM (Custom Recovery) များထည့်သွင်းနိုင်တယ်။
5. 2016 FRP Lock များ Bypass ပြုလုပ်နိုင်တယ်။
Update version ကိုအလိုရှိတဲ့သူတွေကတော့
Download Latest Odin 3.11.1 Tool For All Samsung
Password ကတော့ (MCMM) ပါခင်ဗျာ။
မျှဝေသူ U Oo Cracker မှာ Friday, June 10, 2016 No comments:
Samsung Galaxy J3 All Models Stock Firmware BY CHAN LAY (MCMM)
Samsung Galaxy J3 All Models အတွက် Stock Firmware များကို ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်၊ မူရင်းလင့် အတိုင်းပြန်လည် မျှဝေပေးထား တာပါ။
ဒေါင်းလော့လင့် များလည်း အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ အလိုရှိတဲ့ သူအတွက်ပါ။
ဗားရှင်းများနဲ့ Lollipop 5.0 J320R4 Model အတွက်တော့ 6.0 ဗားရှင်း ပါဝင်ပါတယ်။
တင်နည်းကတော့ ပုံမှန်အတိုင်း Odin Flash Tool ဖြင့်တင်ယူနိုင်ပါတယ်။
Download the latest Odin flashing Tool
Download Galaxy J3 All Firmware
Download Samsung J320F Firmware
Download Samsung J320G Firmware
Download Samsung J320H Firmware
Download Samsung J320P Firmware
Release Date :- November 2015 .
Models :- J320F, J320G, J320H, J320P, J320R4
Type :- “.Tar” file & Odin Flash Tool
Download Samsung J320R4 6.0 Firmware
How to Install Only tar.file Firmware
ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ Odin ကို အရင်ဖွင့် လိုက်ပါ။
Odin က PDA ဆိုတဲ့နေရာမှာ Stock Rom.tar ဖိုင်ကို ထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ဖုန်းကို Download mode သွင်းလိုက်ပါ။
Download mode = volume down + Home + power
ပြီးရင် volume up တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဖုန်းမှာ Download mode ၀င်ပြီဆိုရင်တော့ computer နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ။
Odin မှာ ဖုန်းကိုသိပြီဆိုရင် Odin က Start ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Odin မှာ PASS ပြပြီးဖုန်းမှာ Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
ပါဝါပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာ Official Firmware လေးကိုတွေ့မြင်ရပါပြီ။
How to Install Full Official Firmware
ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ Odin ကိုအရင် ဖွင့်လိုက်ပါ။
Odin က Bootloader/PDA/Phone/CSC ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Firmware Folder ထဲမှ ဖိုင်များကို ထည့်လိုက်ပါ။
ပါဝါပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်း Official Firmware လေးကိုတွေ့မြင်ရပါပြီ။
Credit : www.gizrom.com
ဇူးနစ် (နည်းပညာ) ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
My Facebook Wall- (HERE)
မျှဝေသူ U Oo Cracker မှာ Tuesday, June 07, 20162comments:
Samsung Galaxy E7 ( Sm-E700H ) version 4.4.4 ROOT + CoC Myanmar Font
Samsung Galaxy E7 ( Sm-E700H ) ကို version 4.4.4 မှာ ROOT လုပ်ပြီး CoC မှာ မြန်မာစာ သုံးချင်လို့ တောင်းဆို ထားတဲ့ သူတွေ အတွက် ROOT လုပ်နည်းလေးနဲ့ CoC မြန်မာစာလေးကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ROOT လုပ်ရန် အရင်ဆုံး လိုအပ်တာလေးကို ရယူလိုက်ပါ။
▼ CF-auto root package ▼ OR ▼ <<< Odin v3.07 >>> ▼
Download ရယူထားတဲ့ Odin v3.07 ကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပါ။
Odin ပွင့်လာပြီဆိုရင် Odin ရဲ့ PDA နေရာကို Click လိုက်ပါ။
Broswe ကနေ Download ရယူထားတဲ့ Cf-auto root file လေးကို ရွေးပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
ဖုန်းကို Download mode သွင်းပြီး USB ကြိုး ထိုးပေး ရပါမယ်။
ဖုန်းကို Download mode ၀င်နိုင်ရန် အောက်က key လေးတွေ အတိုင်းနှိပ် လိုက်ပါ။
Download mode >>> Volume down + Home + Power
အထက်ပါ key လေးကိုနှိပ်ပြီးရင် Volume up တစ်ချက်နှိပ် ပေးလိုက်ပါ။
Download mode ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ Computer နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေး လိုက်ပါ။
Odin မှာ Device ကိုသိပြီဆိုရင် Odin က Start ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Odin ကနေ အလုပ် လုပ်ပေးနေ ပါလိမ့်မယ်။ ခဏစောင့် ပေးလိုက်ပါ။
Odin မှာ PASS ဆိုပြီး ပြလာပြီး ဖုန်းမှာ reboot ကျသွား ရင်တော့ ROOT လုပ်ခြင်းပြီးစီးပါပြီ။
ဖုန်းပါဝါ ပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ USB Debugging mode တို့ Unknow Source တို့ကို on ပေး ထားလိုက်ပါ။
CoC ကို မြန်မာစာ ထည့်ရန် လိုအပ် တာလေးကို Download ရယူ လိုက်ပါ။
▼ Download Here For CoC Muanmar Font ▼
Download ရယူထားတဲ့ CoC Myanmar Font bat file လေးကို Computer မှာ ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် ဖုန်းကို USB ကြိုးထိုးပြီး Computer နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေး လိုက်ပါ။
ဖုန်းမှာ ROOT access တောင်းလာရင် Grant (or) Allow ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဖုန်းမှာ reboot ကျသွားပါမယ်။
ပါဝါပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ CoC လေးကို ၀င်ပြီး Myanmar Font စမ်းသပ်နိုင် ပါပြီ ခင်ဗျာ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, September 27, 20155comments:
ကဏ္ဍ Root, Samsung, ဖုန်းနည်းပညာ, မြန်မာဖေါင့်
Samsung Lollipop devices(Model အပောာင်း) တွေ အတွက် Samsung KeyBoard
Samsung Lollipop devices(Model အပောာင်း) တွေ အတွက် Samsung KeyBoard ကို Ko Aung Thura ( MMUG ) က ဖန်တီးပေးခဲ့ လိုက်ပြန်ပါပြီ။
မထူးဆန်း ပေမယ့် မရသေးတဲ့ သူတွေ ထည့်နိုင်အောင်ရယ်.. Update ဖြစ်တဲ့ S6 Edge Plus ထဲက Samsung Keyboard ကို Samsung Lollipop devices( Model အဟောင်း ) တွေမှာ သုံးနိုင်အောင် Modified ထားတာပါ လို့ ပြောထားပါတယ်။
မြန်မာ ( Zawgyi )
မြန်မာ ( Unicode )
လက်ကွက် ၂ ခု ပါလာအောင် လုပ်ထား ပါတယ် .. ( Keyboard setting ထဲမှလိုချင်တာကို ဖွင့်ပေးပါ )
Custom Recovery ( cwm or twrp )
ကနေ zip file install ပါပဲ ..
⚠⚠⚠ အရင်ဆုံး SamsungIME folder ကို backup ယူထားပါ ..
Folder permission အထဲက files တွေ permission မှတ်မိအောင် photo ရိုက်ထားပါ ..
ကဲ Samsung Keyboard အသစ်လေးမြည်းစမ်းကြည့်ကြဗျာ …
▼ Userscloud မှာ နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူပါ ▼ OR ▼ Mediafire မှာ နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူပါ ▼
Credit >>> hKo Aung Thura ( MMUG )
Original link - https://www.facebook.com/aung.thura.16
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, September 17, 20154comments:
ကဏ္ဍ Android, Samsung, မြန်မာကီးဘုတ်
Samsung Galaxy Note3Lollipop Firmware & Tutorial
Samsung Galaxy Note3အတွက် Lollipop Firmware တောင်းရင်း ဘယ်လို တင်ရမလဲလို့ မေးထားတဲ့ အတွက် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ Note3ကိုင်ဆောင်သူ အားလုံးလဲ လိုအပ်ရင် လေ့လာ လိုက်ပါ။
အရင်ဆုံးလိုအပ်တာလေးကို အောက်ကလင့် ကနေ ရယူ လိုက်ပါ။
Lollipop Firmware SM-N900
Lollipop Firmware SM-N9009
Lollipop Firmware SM-N9006
Lollipop Firmware SM-N9000Q
Lollipop Firmware SM-N9005
Odin v3.07 - Download Odin 3.07
ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ Odin ကို အရင်ဖွင့် လိုက်ပါ။ Odin က PDA ဆိုတဲ့ နေရာမှာ CF-Auto Root ဖိုင်ကို ထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် volume up တစ်ချက်နှိပ် ပေးလိုက်ပါ။
ဖုန်းမှာ Download mode ၀င်ပြီဆိုရင်တော့ computer နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေး လိုက်ပါ။
Odin မှာ ဖုန်းကိုသိပြီ ဆိုရင် Odin က Start ဆိုတာလေး နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Odin မှာ PASS ပြပြီးဖုန်းမှာ Reboot ကျသွား ပါလိမ့်မယ်။
ပါဝါပြန်တက် လာပြီ ဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာ Firmware တင်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, September 13, 2015 8 comments:
ကဏ္ဍ Android, Firmware, Samsung
T2 Ultra and T2 Ultra Dual 5.1.1 firmware – 19.4.A.0.182
T2 Ultra နဲ့ T2 Ultra Dual တို့ အတွက် Lollipop 5.1.1 firmware 19.4.A.0.182 ပါ Latest version လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
T2 Ultra D5303 19.4.A.0.182 Download Link
T2 Ultra Dual D5322 19.4.A.0.182 Download Link
Sony Flashtool Download Link
Aung Khaing (MMAS)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, September 09, 2015 No comments:
Lollipop Firmware For Samsung Galaxy E5 v 5.1.1
Samsung Galaxy E5 အတွက် Lollipop Firmware လေးပါ။
တောင်းထားတဲ့ အကိုနဲ့ အတူ လိုအပ်တဲ့ ချစ်ပရိတ်သတ် အားလုံး Download ရယူနိုင် စေရန် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
Download ပြုလုပ်ရ လွယ်ကူအောင်လဲ Dev-Host.com link လေးနဲ့ တင်ပေး ထားပါတယ်။
အောက်ကလင့်ကနေ ရယူလိုက်ပါ ခင်ဗျာ။
▼ Galaxy E5 ( SM-E500H ) ▼ OR ▼ Odin 3.07 ▼
Odin က PDA ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Firmware ဖိုင်ကို ထည့်လိုက်ပါ။
ဖုန်းမှာ Download mode ၀င်ပြီ ဆိုရင်တော့ computer နဲ့ ချိတ်ဆက် ပေးလိုက်ပါ။
Odin မှာ ဖုန်းကို သိပြီဆိုရင် Odin က Start ဆိုတာလေး နှိပ်ပေး လိုက်ပါ။
Odin မှာ PASS ပြပြီး ဖုန်းမှာ Reboot ကျသွား ပါလိမ့်မယ်။
ပါဝါပြန်တက် လာပြီ ဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာ Lollipop Firmware တင် ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, September 07, 2015 No comments: